Saturday June 13, 2020 - 19:27:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ismaaciil Cumar Gelle ayaa magaalada caasimadda ah ee Jabuuti ka sheegay in ay wadahadal fool ka fool ah isugu keenayaan Farmaajo iyo Muuse Biixi islamarkaana ay gogol xaar unoqon doonaan is faham gaar ah oo labadaas dhinac dhaxmara.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Jabuuti uu gaaray Abiy Axmed R/wasaaraha Itoobiya oo la sheegay in uu yahay ninka soo hindisay isku keenidda Muuse Biixi iyo Farmaajo.
Itoobiya oo labada maamul ee Somaliland iyo Dowladda Federaalka si dadban usiisa awaamirta ay ku shaqeeyaan ayaa doonaysa in ay xadayso khilaafka udhaxeeya dhinacyada.
bishii Feberaayo ee lasoo dhaafay ayuu R/wasaaraha Itoobiya bilaabay in uu wadahadal ka dhax furo Farmaajo iyo Muuse Biixi, bilihii lasooa dhaafay ayay Addis Ababa iyo Asmara wadeen suuq geyn ay usameynayaan wax ay ugu yeereen midaynta dalalka dhaca bariga Afrika oo Soomaaliya ay kamid tahay.
Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo kulan hordhac ah ku yeesha Dhuusamareeb.